Torohevitra fanoratana isankerinandro: Ny fitsipika amin’ny fitanisàna avy ao amin’ny tambajotra sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2019 18:19 GMT
Ho an'ireo mpanao gazety matihanina, fanamby iray ny famantarana raha toa ka mendri-pitokisana ny loharanom-baovao iray ao amin'ny tambajotra sosialy (manana fehezana taridàlana natokana ho an'ny fanamarinana ny votoatin'ny tambajotra sosialy ny Global Voices). Fa rehefa mitanisa avy ao amin'ny tambajotra sosialy ianao, misy zavatra hafa mila jerena fanampin'ilay olana amin'ny fahamarinana, toy ny endrika maha an'ny daholobe/manokana an'ireo tambajotra sosialy.
Mazava ho azy, misokatra ho an'ny daholobe ny Twitter ary manana ny safidy ny hanova ny momban'ny hafany ho lasa ho azy manokana ireo mpampiasa azy. Fa ny maha ho an'ny daholobe ny zavatra iray dia tsy voatery midika hoe manaraka fitsipika ny fampiasàna izany. Marina fa ho an'ny olana saropady toy ny fanafihana ara-pananahana na ny famonoantena, tokony hitandrina ny olona rehetra (fa tsy ireo mpanao gazety ihany) amin'ny fizaràna ilay hafatra amin'ny vondrom-piarahamonina midadasika kokoa. Tsy voatery hidika foana hoe manaraka fitsipika ny ara-dalàna, hoy ny blaogera Tauriq Moosa. (Pao-tsatroka ho an'i Sahar sy Lauren tamin'ny fanasongadinana ity adihevitra ity.)